Ogaden News Agency (ONA) – Halkan ka dhageyso Wareysi Cabdullahi Xusen uu siyay Sverige Radio kadib shirki Human rightska
Halkan ka dhageyso Wareysi Cabdullahi Xusen uu siyay Sverige Radio kadib shirki Human rightska
Hoos waxaad ka dhageysataan Wareysi qiimibadan oo Halyey Cabdulullahi Xuseen uu siiyay Radio laga leeyahay wadanka Sweden. Wareyisgan ayaa laga qaaday maanta mar uu ka hadlay Shirkii Human Rightska ee looga hadlayay qadiyada Ogadeniya. Warbixinta shirkaas ayaa dhowaan aad heli doontaan.
Cabdulahi ayaa maanta ka qeyb galay kulan ay lahaayeen Haayadaha Xuquuql insaanka oo looga hadlayay arrimaha xoriyad qowlka. Cabdullaahi ayaa kamid ahaa marti sharafta shirkaas ka hadlaysay waxuuna ka hadlayay Xaalada Xuquuqul insaan ee Ogadeniya.
Waxaa shirkan Cabdullaahi uu kula kulmay saxaafada wadanka Sweden oo goob joogayaal ahaa wareysiyona ka qaaday. Waxaana kamid ahaa Radioha laga dhageysto wadanka Sweden ee Sverige Radio oo su aalo weydiiyay. Waxaa wax laga weydiiyay muuqaladi Filimada ahaa ee laga duubay wariyaashi ree Sweden ee beenta ahaa. Waxaana uu ka hadlay Sababta ku dhalisay in filimadaas uu caalamka usoo bandhigo isaga oo ku jawaabay.
Kadib markii aan arkay xaalada foosha xun ee ay ku sugnaayeen labada wariye ayaa u jidh damqaday wariyaashaas oo larabay in danbilayaal laga dhigo kadibna waqti dheer lagu xukumo oo xabsiga la dhigo. Marka waxa igu dhashay inaan filiman helo markii ay maxkamada ay marayeen waqtigaas oo aan bilaabay inana keydiyo filimadan si aan u cadeeyo in wariyaashan waxa lagu eedeynayo ay been tahay.
Cabdullaahi ayaa waxa kale uu ka hadlay xasuuqa shacabka Ogadeniya loo geysto isaga oo sheegay in Gabdhaha kufsi loo geysto kadibna nolosheeda 50% ay tahay in la daayo ama in la dilo. Waxayna u badantahay in ladilo. Waxuu ka hadlay jidh dilka iyo tacadiyada badan ee loo geysto shacabka Ogadeniya.
Cabdullaahi ayaa sheegay innuu ku faraxsanyahay in filimaanta uu soo saaray, u jeedadisuna aysan aheyn kaliya innuu caawiyo wariyaasha ree Sweden. Labadaas wariye aqoon uma laheyn xidhiidh naga dhexeyayna majirin. Lakiin aad baan ugu faraxsanahay waqtigan saxiibo ayaanu nahay wayna iiga mahad celiyeen arrintaas.
Haddii aan filimadan lagu waxyeelaynayo shacabka Ogadeniya iyo wariyaasha ree Sweden aan soo saari laheyn noloshayda oo dhan waxaan ku dhameysan lahaa walbahaar iyo murugo waayo markaad xog oggaal tahay dhibkana aad aragto shacabkaaga lagu hayo. Marka arrin wanaagsan ayay aheyd inaan warkaas soo saaray.